Ny volon'ny lamaody lamaody indrindra amin'ny taona 2018 - ny fironana farany ho an'ny blondes, brunettes, mena ary volom-bolo, ho an'ny longo
Loko volom-parasy 2018 - inona ny felam-boninkazo amin'ny lamaody amin'ity taona ity?
Ao amin'ny bika aman'endriny, matetika ny vehivavy dia manandrana ny volo, ny volo, ny styling ary ny halavany. Ny maha eo amin'ny tendron'ny lamaody dia mora - mila mihaino ny fironana amin'ny taona ho avy ianao ary misafidy loko volom-biby lamaody 2018. Mampihatra izany, afaka manao zavatra tsy hay hadinoina ianao.
Loko volom-borona 2018 - loha lamaody
Tsy misy zavatra mamelombelona toy ny fihenan-damba havanana sy loko volom-bolo vaovao 2018, izay misitraka tanteraka ny fanjakana anatiny. Ny loko maoderin'ny volom-borona amin'ny 2018 dia hamela ny feony mahazatra, hisarika ny saina ho azy ary hanantitrantitra ny maha-izy azy. Azontsika jerena ny fironana ankehitriny:
Ity dia taona nanaovana fanandramana feno fahasahiana tamin'ny andaniny sy ireo kilasy mahazatra tamin'ny fanamarihana vaovao - etsy andaniny. Vehivavy maro no manisy fikorontanana mitovy amin'izany, mba hanamafisana ny maha-izy azy . Ireo izay mijanona ho mahatoky amin'ny lamaody malaza, fa efa nanapa-kevitra tamin'ny dingana kely saro-bidy, amin'ny taona 2018 dia afaka manandrana ireo lozika mitongilana amin'ny loko. Amin'ny ohatra ohatra, afaka mitondra loko marevaka tsara tarehy ianao, izay lohahevitra amin'ny sary.
Ny natiora ihany koa dia mijanona ao am-pijerena, fa ny fanamafisana dia ny halaliny sy ny satam-pandrefesan'ity loko palitika ity. Mety ho katsatsaka harona, mainty, kodiarana mena ary volamena manga.
Mahazo fomba toy izany ny melirovanie, mety tsy hitan-javatra na mifanohitra, mahasarika ary manintona ny saina.
Aza hadino ny ombre popularité, raha misy fifindrana mivaingana avy amin'ny vahaolana volo amin'ny hafa.
Eo anivon'ny tanora, nanjary malaza ny fanangonana, raha toa ny fahazavana voajanahary amin'ny fomba tsy mahazatra toy ny loko manga sy manga.
Ny teknolojia sy ny endri-tsoratra farany dia azo ampiasaina amin'ny làlan-dàlana rehetra, avy amin'ny fotoana fohy.
Ny fitaovana stylistic dia afaka manantitrantitra ny maha-zavakanto ny horita maro be, rehefa samy hafa ny kofehy maromaro amin'ny fanampiana ireo karazana loko samihafa.
Amporisihina ny endriky ny taovolo voafidy amin'ny endriny ankapobeny sy ny toetry ny tovovavy. Raha tia ny fiterahana sy ny fitiavan-tanindrazana izy, dia tokony hanome lanja ny natiora izy. Ireo tovovavy tanora, izay miezaka mamorona tsipìka mahavariana, dia mifanohitra amin'izany, dia afaka misafidy ireo loko loko tsy manara-drenirano.
Loko volom-parasy 2018 ho an'ny brunettes
Brunettes, mamirapiratra eo amin'ny natiora, mazàna maneho ny famirapiratany, raha mihazona ny maha-izy azy. Ho an'ity ankizivavy ity dia manomana teknikam-panofanana mahaliana izay maneho ny lokon'ny volom-borona 2018 "brunette":
Ampiasao ny toro-hevitra momba ny fanangonana, ny lokon'ny loko ary ny fiantraikan'ny ampahany nodorana. Izany rehetra izany dia noforonin 'ireo mpampianatra miaraka amin' ny alalan 'ny fiangonan-tsarimihetsika voafaritra manokana sy toning.
Popular amin'ny taona vaovao, ny vokatrin'ny amethyst mamirapiratra eo amin'ny kofehy mainty sy maingoka be milalao masoandro sy ireo fitaovana fanairana dia ho lasa zava-dehibe. Amethyst, izay aseho amin'ny karazana manga, cherry, emeralda ary vy, dia hanasongadina ny natiora.
Loko volom-behivavy 2018 ho an'ny blondes
Ny blondes dia afaka manasongadina ny hakanton'ny natiora amin'ny vahaolana samihafa izay tafiditra ao anatin'ny sokajy "blondes". Amin'ny alalan'ilay raki-tsoratry ny firafitry ny tasy, ny tompony dia afaka hahavita lalao mahaliana sy miavaka. Azonao atao ny manamarika fironana toy izany izay manamarika lamaody vehivavy lamaody lamaody 2018:
Ny blondes, avy amin'ny varimbazaha faran'izay mangatsiaka, dia afaka misafidy tsara ny fomba fiasany amin'ny alalan'ny fanovàna ny fiovana "manga". Mahita tsara ary afaka manintona ny saina.
Azonao atao ny mampihatra teknikam-pamokarana sy famafazana, hanome endrika volavolan-tsary izany ary hampiavaka azy bebe kokoa mandritra ny styling.
Ny lokon'ny volom-borona 2018 ho an'ny mena
Ny tonony mena dia miavaka amin'ny olona izay manana izany, dia mamirapiratra amin'ny tenany ihany. Tsy mety very izany fahazavana izany, mijanona fotsiny mba hanasongadinana sy hanampiana aksantatra. Ny volom-bolo mena amin'ny 2018 dia hahazo ny fironana vaovao amin'ny fihazonana ny famirapiratana sy ny maha-izy azy. Ity dia miseho amin'ny antsipiriany manaraka:
Ny fametrahana vaovao vaovao momba ny fanangonana dia ho lasa malaza amin'ny loko mena, mirehitra ary varahina.
Ireo izay maniry hametraka ny hamirapiratry ny sary mena dia afaka mampiasa ny serivisy hanamafisana ny toro-hevitra. Ny mifanohitra sy ny nofinofy fanta-daza, lavitra ny natiora, izay hameno ny loko mena amin'ny 2018, dia hisarika ny saina.
Ny loko volom-behivavy 2018
Ny fanangonana ny volom-bolo amin'ny 2018 dia homena be. Ireo akanjo marevaka dia mifanipaka amin'ny tady. Ny endriky ny loko volom-bohoka 2017-2018 dia aseho amin'ny endrika isan-karazany:
Ny feo marevaka sy mihetsiketsika, toy ny mavokely , volomparasy, emeralda, manga dia mbola eo am-pandalovana. Amin'ny alalan'izy ireo no hamoronana ny tsipìka mahagaga sy tsy hay hadinoina indrindra.
Ny fifindrana mahomby avy amin'ny loko iray mankany amin'ny hafa dia fomba iray hafa izay ahafahan'ny Stylista hahafaly ny mpanjifany. Ny mainty any amin'ny fakany sy ny fofom-bolo amin'ny tendrony dia mbola eo am-pandehanana.
Ny klasika sy ny natiora dia malaza amin'ny fomba iray ihany ary tsy hitsahatra ny hivoatra. Ny hatsaran-tarehy dia mora amboarina amin'ny tady manify izay mamorona ny fiantraikany amin'ny filalaovana masoandro.
Loko volom-behivavy 2018 ho an'ny maso maitso
Ny maso maitso dia mety ho voaongotra tsy amin'ny alalan'ny fanampiana fotsiny amin'ny fomba mahazatra, fa koa ny fisafidianana ny loko volomborona amin'ny 2017-2018. Hita taratra izany amin'ny fironana toy izany:
Ny lolo mena-mavo - ny ankamaroan'ny fandresena amin'ny zazavavy manana maso maitso. Tsy miongotra fotsiny izy ireo, fa mamirapiratra sy mamirapiratra amin'ny maso.
Ny vokatra maitso "blond" dia manasongadina tsara ny fijery maitso, manome ny sarin'ny tsy fananan-tsiny sy ny fisokafana.
Raha misy faniriana handoko ny fery amin'ny tonony mena, dia mety tsy misalasala loatra ny tompon'ny maso maitso. Ny loko volomparin'ny lamaody 2018 dia havelany hiseho tsy hay lazaina.
Loko volom-behivavy 2018 ho an'ny maso manga
Ny fomban-tsika malaza dia blondy manana maso manga. Ny lokon'ny volom-borona 2018 ho an'ireo zazavavy mavomavo dia aseho amin'ny karazany toy izany:
Mianara fomba hafa amin'ny "blondes", avy amin'ny varimbazaha mafana, somary mavo, ary mangatsiaka mangatsiaka. Vita amin'ny maso manga ny volo marevaka, marevaka marevaka na loko mareva-doko.
Fombam-bolo malaza sy lamaody matevina amin'ny maso manga. Ny loko volom-borona 2018 dia mety ho ao anatin'ny sôkôla maitso matevina amin'ny mainty sy aloky ny elatra an-kavoana - fifanoherana tena tsara ho an'ny hoditra maitso sy maso manga. Ny tononkalo matevina dia mety miovaova ary tena hafa tanteraka, mety ho maivana be loatra mba hanamboarana ranon-javatra hita maso sy miloko volom-borona rehefa mipaka.
Loko volom-behivavy 2018 amin'ny maso manopy maso
Ireo mason'ny volom-borona dia afaka manara-maso tsara ireo fanandramana rehetra ary misafidy ny loko volom-biby lamaody indrindra amin'ny taona 2018. Azonao atao ny mamaritra vahaolana tena mahomby:
Ny brunettes miloko mavo dia sary malaza. Ny endriky ny habakabaka avy amin'ny mainty-mena sy mainty dia mifamatotra amin'ny maso mibontsina sy maitso.
"Brunettes" kilaona "misy ravina kely mavokely na ravina mihitsy aza - izany no ho lamaody amin'ny taona 2018 vaovao.
Loko volom-behivavy loko mena sy mavo 2018 ary maso mena - izany no tena halalin'ny sary.
Ny blondita amin'ny maso mena koa dia tsy mahazatra ary ny haben'ny alokaloka "manga" dia tena lafo. Mandritra izany fotoana izany dia manoloana ny fiheverana fa ny paletsy loko toy izany dia mifanaraka amin'ireo tovovavy tanora, izay omena maso mason'ny masony, izay mety misy "volamena" kely.
Hira fialana amin'ny tarehy sy volon-doko 2018
Ny famokarana vetivety fohy dia tena manan-danja tokoa amin'ny taona ho avy, ary mbola eo amin'ny tendron'ny lamaody mbola fohy sy asymmetrical hairstyles. Noho izany, vehivavy maro loko no manontany hoe: inona no lokon'ny volom-biby lamaody amin'ny 2018? Misy valinteny mitovy amin'izany:
Ny asymmetrika dia ho tratra tsy noho ny teknolojia ihany, fa koa ho fanamafisana amin'ny fanampiana ireo singa sarobidy.
Ny firaiketam-behivavy tsotra, toy ny kodiarana, cascades, tsaramaso, kilaometatra efa hatry ny ela, dia ho mora kokoa amin'ny loko fanandramana. Noho izany, ho an'ny haingon-koditra malaza, indrindra fa ny volom-borona sy ny maro an'isa, dia ho malaza ny teknika amin'ny famoronana ny voka-dratsin'ny afo amin'ny masoandro.
Narotsaka manify tsy ara-boajanahary: mavokely, manga, mena, emeralda - teknika izay malaza amin'ny fanangonana ny fehikibo kokoa noho ny halavany.
Ny fampiharana ny loko voajanahary voajanahary, izay manome ny halavany noho ny fihodinany, dia raisina ihany koa.
Mody volom-behivavy 2018 ho an'ny volo fohy
Hanjary tena manan-danja amin'ny 2018 ny volo fotsifotsy fohy. Ny Asymmetry sy ny halavany fohy - ireo no singa fototra tena ilain'ny stylists. Mba hanamafisana ny fifandraisana amin'ny lokony, hanasongadinana izany ary hanomezana azy bebe kokoa hanaitra ny loko maoderina lamaody 2018. Maneho izany karazana izany izy:
Eo amin'ny fironana dia hisy singa mamirapiratra sy marefo, tetezamita gradient;
Ireo tia ny mpanakanto klasika dia afaka misafidy ireo safidy izay ao anatin'io fironana io - karazana loko voajanahary, mainty sy mena. Amin'io safidy tsara io, dia hahita harem-be sy lalina izy ireo;
Raha te-hanandrana ianao, fa tsy manana herim-po, dia afaka misafidy loko mangalatra ny tendron-tsoratry ny tadiny.
Loko mody 2018 ho an'ny volo lava
Ny fitongilanana lava dia mahavariana, ary azo atao ny manantitrantitra io hatsarana io amin'ny alalan'ny fanampiana amin'ny fikoropahana maotina. Ny haingon-koditra sy ny lokon'ny volom-borona 2018 dia manavaka ny endri-javatra toy izany. Na inona na inona endrika nofidiana dia voafidy: cascade na làlan-dàlana iray, - ny alokaloky ny mazava, ny hazavana, ny mena dia tonga eo amin'ilay toerana. Raha marihina miaraka amin'ny tadiny miavaka izy ireo, dia hanome azy ireo volavolan-tsary sy fahitana hafa.
Teknolojia mampangetaheta volom-borona 2018
Rehefa mamorona sary maoderina, rehefa mampiasa ny loko lamaody lamaody 2018, dia mampiasa teknika maro:
Ny famolavolana ny endrik'olona manokana, indrindra fa ny fitiavan'ireo tompon-trano lava lava.
Ny famokarana sy ny fanangonana dia ny singa fototra amin'ny taona ho avy.
Azo atao tsara ny misy volon'osy melirovanie, ny loko lamaody 2018 dia azo antoka tanteraka. Efa niditra tao amin'ny kilasy izy ary nitombo ny isan'ireo mpankafy azy.
Ny fivoaran'ny gradient dia hahazo hery.
Lipstick lamaody maoderina 2015
Dresses avy amin'i Kira Plastinina
Sports Fashion Spring-Summer 2013
Fonosana varavarankely misy varavarankely misy lantihy ho an'ny tranon'ny firenena iray
Harena an-kibo - toetra mahasoa
Fitaovan'ny trondro - sakafo matsiro mahasalama ho an'ny fianakaviana iray manontolo
Fanafody ho an'ny zazalahy
Mastitis - fitsaboana any an-trano
Hémorrhoids amin'ny fitondrana vohoka - fitsaboana
Blue Kitchen - hatsikana mahazendana amin'ny famoronana sehatra manokana
Fitomboana an'i Mark Zuckerberg